Malaga waa dhibaatada Luis Enrique ee ma ahan dhibaatada Real Madrid (Warbixin u muhiim ah loolanka La Liga) | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » Malaga waa dhibaatada Luis Enrique ee ma ahan dhibaatada Real Madrid (Warbixin u muhiim ah loolanka La Liga)
Malaga waa dhibaatada Luis Enrique ee ma ahan dhibaatada Real Madrid (Warbixin u muhiim ah loolanka La Liga)
Real Madrid ayaa marti u noqon doonta Malaga Axada, iyadoo Malaga ay tahay rajada keliya ee u dhimman kooxda tababare Luis Enrique ee Barcelona si ay u difaacdaan koobka horyaalka La Liga.
Haddii Malaga ay guuldarro dhabarka u saari weyso Los Blancos, markaas kooxda ka dhisan caasimadda Spain waxay noqon doontaa horyaalka Isbaanishka markeedii 33aad, tababare Luis Enrique ayaana Arbacadii arkay Real Madrid oo si xun legdeysa kooxdiisii hore ee Celta Vigo.
Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqadu waxay muujineysaa in aysan Malaga aheyn kooxda natiijooyinka wanaagsan soo xareysata marka ay wajahdo Real Madrid, bedelkeedase waxay natiijooyin wanaagsan heshaa marka ay wajahdo koox uu hogaaminayo Luis Enrique.
Sababtoo ah seddax guuldarro iyo laba barbardhac ayey ka keensadeen ciyaarihii ay Malaga wajaheen kooxaha tababare Enrique waayihiisii Celta Vigo iyo kooxda Barcelona, halka uu isna seddax guul ka gaaray kooxda lagu naanayso Andalusians.
Luis Enrique ayaase ka rajeynaya Malaga Axadaan inay xaaladda ku adkeyso Los Blancos, iyadoo keliya guul ay gaarto Malaga ay ka dhigeyso inay Barca difaacato koobka La Liga.